ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထဲမှ ပြည်သူ့အာဏာကိုလု ပြည်သူလူထုကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာရယူရန်… – PVTV Myanmar
ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထဲမှ ပြည်သူ့အာဏာကိုလု ပြည်သူလူထုကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာရယူရန်…
ပြည်သူ့အစိုးရလက်ထဲမှ ပြည်သူ့အာဏာကိုလု ပြည်သူလူထုကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ပြီး အာဏာရယူရန်ကြိုးစားနေတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်အား ဆန့်ကျင်တော်လှန်နေကြသော သူရဲကောင်းများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် တင်ဆက်ထားသော “နွေဦးတော်လှန်ရေး” အမည်ရ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 4.4K Share – 325
Esther Min says:
2021-06-17 at 11:26 PM
Well done. Better if the descriptions are grammatically correct.
We must win 👏🏻💪🏻✊🏻💗💗💗
2021-06-18 at 3:28 PM
Teachel May says:
Zar Ni Aye Khaing says:
2021-06-21 at 8:46 AM
နွေဦးတော်လှန်ရေးကာလ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းပေါင်းစုံ သပိတ်စစ်ကြောင်းမှတ်တမ်း…
ပြင်ပမှာပါမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာမှာ မလုံခြုံတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ အွန်လိုင်းလုံခြုံရေ…